Waxa laga qabanayo Dominican Republic | Wararka Safarka
Waxa laga qabanayo Dominican Republic
Maria | | America, Jamhuuriyadda Dominican
Si looga fikiro Dominican Republic waa in la qiyaaso xeebaheeda quruxda badan ee cad cad, biyaheeda turquoise-ka oo ay ka buuxaan meerisyo ay ku noolyihiin nibiriyada wabiga iyo kalluunka midabada badan leh, hawadeeda aadka u xiisaha badan ee leh lagoonnada, godadka iyo xitaa meesha ugu sarreysa ee Kariibiyaanka: Duarte peak.
Si kastaba ha noqotee, Dominican Republic ayaa aad uga badan. Santo Domingo, caasimada dalka, wali waxay ilaalinaysaa dhismayaasha qaab dhismeedka cajiibka ah ee qayb ka ahaa mid ka mid ah magaalooyinkii ugu horeeyey ee Isbaanishku ka aasaasay America.
Ku dar waxaas oo dhan jawigeeda weyn iyo tayada dadkiisa. Soo dhawayn, madadaalo, taxaddar la'aan… Ma rabi doontid inaad ka tagto waddankan cajiibka ah! Ma rabtaa inaad ogaato wax kasta oo aad ka qaban karto Dominican Republic? Waan kuu sheegi doonaa!
2 Beerta Qaranka Los Haitises
Haddii aad jeceshahay socodka, mid ka mid ah waxyaabaha laga sameeyo Dominican Republic waa in la fuulo Puerto Duarte, oo ah meesha ugu sareysa Antilles oo leh 3.087 mitir oo joog ah. Waxay ku wareegsan tahay dhowr culeys oo ka badan 2.600 mitir sida Pico del Barranco, Pelona Grande, Pico del Yaque ama Pelona Chica laakiin Pico Duarte waa aragtida ugu fiican dalka waana xidigta buuraha bartamaha oo dhererkeedu yahay 250 kilomitir.
Fuulashada Pico Duarte waxay socotaa seddex maalmood waxayna ka bilaabataa meel u dhow biya xireenka Sabaneta, oo qiyaastii 20 kiiloomitir waqooyiga ka xiga San Juan de la Managuana, oo ka mid ah magaalooyinka ugu faca weyn dalka. Wadadu waxay dhex martaa beeraha la beero illaa iyo 1.500 oo mitir oo ka sarreysa heerka badda ka dibna waxay sii martaa ballaadhinno qaro weyn oo geedaha Creole ah. Habeenkii ugu horreeyay ee socdaalku wuxuu ka dhacayaa magangelyada Alto de la Rosa iyo tan xigta ee Macutico. Inta lagu jiro maalinta ugu dambeysa ee wadada, waxaad gaari laheyd dusha sare waxaadna joogi doontaa magangalyada La Comparición.
Laga soo bilaabo dusha sare ee Pico Duarte waxaad ka fikiri doontaa aragtiyo qurux badan oo aad hubaal ka qaadi doontid dhowr sawir oo aad ku qaadatid guriga. Intaa waxaa dheer, meel u dhow meeshan waxay ku dhashaan Yaque del Sur iyo Yaque del Norte, oo ah labada webi ee ugu waaweyn Dominican Republic. Ka faa'iideyso dibad baxan si aad iyaga ula kulanto.
Beerta Qaranka Los Haitises
Waqooyiga-bari waa mid ka mid ah geesaha ugu quruxda badan ee Dominican Republic, dhul bikro ah oo leh biyo turquoise, mangroves, shimbiraha u guuraya iyo godad cajaa'ib leh oo ay qurxiyaan Taino Indian: Los Haitises National Park. Muuqaal u gaar ah oo, muuqaalkiisa duurjoogta ah darteed, ayaa loo doortay in lagu duubo muuqaallo qaar ka mid ah filimka Jurassic Park.
Beerta Qaranka Los Haitises waa jawharad dabiici ah. Isku darka biyaha iyo dhagaxa oo soo bandhigaya nidaam dhan karst oo la sameeyay 50 milyan oo sano ka hor in ka badan 1.600 kiiloomitir oo laba jibbaaran. Way adagtahay in la baaro ninka reer Yurub, Tainos wuxuu ku guuleystey inuu dego Haitises. Maanta, waad ku raaxeysan kartaa quruxdeeda lug, doon ama kayak oo waxaad booqan kartaa godadka La Arena iyo La Línea.
Waxaa adduunka oo dhan laga ogyahay in xeebaha Dominican Republic ay yihiin kuwa ugu quruxda badan adduunka qayb wanaagsan oo ka mid ahna sumcadda waxaa qaada kuwa Punta Cana. Si kastaba ha noqotee, kuwa Samaná waa qurux badan yihiin waxayna leeyihiin faa'iido ah inaysan ku qanacsaneyn dalxiisayaasha. Qaar ka mid ah oo aad u baahan tahay inaad sawir qaadatid adiga oo aan lahayn xeebta Punta Popy, xeebta Las Galeras ama xeebta Bacardi.
Intaas waxaa sii dheer, qorrax qoynta iyo ka boodka mowjadaha Samaná waxaad sameyn kartaa howlo kale sida quusitaanka, xariiqa zip, fuulista fardaha ama socodka. Adoo dhex maraya socodka 2,5-kiiloomitir ah ee hawdka, waxaad awoodi doontaa inaad gaarto jaakada cajiibka ah ee biyo-dhaca Limón, biyo-dhac weyn oo 40 mitir dheer.
Haddii safarkaagu ku soo beegmo inta u dhexeysa bilaha Diseembar iyo Maarso, waxaad fursad u heli doontaa inaad aragto marinka nibiriyada badda ee loo yaqaan 'humpback nibiriyada' ee biyaha gacanka Samaná, oo ka mid ah muraayadaha ugu fiican ee dabiiciga.
Markaad dhamaysato ku raaxaysiga dabeecadda qaybtan Dominican Republic, ha ilaawin inaad booqato suuqyada Las Terreras ama Santa Bárbara de Samaná, magaalooyinka ugu waaweyn jasiiradda.
Xeebaha iyo hawdka Jamhuuriyadda Dominican waxay noqdeen dalxiis dalxiis ee ugu weyn dalka, laakiin waxyaabaha ugu wanaagsan ee Dominican Republic laga sameeyo waxaa ka mid ah in la booqdo Santo Domingo, caasimaddeeda, taasoo weli ilaalinaysa dhismooyinkii asalka ahaa ee qayb ka ahaa a. magaalooyinkii ugu horreeyay ee Isbaanishku ka aasaaso Ameerika.
Dhismayaashaan taariikhiga ah waxaa laga helaa qeybtii hore ee magaalada ee loo yiqiin Magaalada Gumeysiga, UNESCO ayaa ku dhawaaqday inay tahay Goob Dhaxal Adduun. Adoo dhex mushaaxaya jidadkeeda jubbada leh waxaad arki doontaa Alcázar de Colón (deggenaanshaha Viceroy Diego Colón), Monastery of San Francisco (kaniisaddii ugu horreysay ee Dunida Cusub, oo ay dhistay amarkii Franciscan ee 1508), Kaniisada koowaad ee Ameerika (the ugu da'da weyn Ameerika), Ozama Fortress (dhismihii ugu horreeyay ee difaac ee Ameerika), Casa del Cordón (guriga ugu horreeya ee dhagaxan oo laba-dabaq ah oo ay dhisteen Isbaanishka Ameerika) iyo Puerta de la Misericordia, irridda koowaad ee Santo Domingo .
Waxaa jira kaniisado badan oo dheeraad ah, macbudyo, qalcado, guryo dhagax ah iyo dhismayaal qadiimi ah oo ku yaal meydadka rasmiga ah ee Isbaanishka Ameerika.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » America » Waxa laga qabanayo Dominican Republic